Amabala, ungawathintela njani? | Amadoda aQinisekileyo
Amabala abonwa bubukho bamaqhakuva, iintloko ezimhlophe ezibizwa ngokuba ziipustules kunye nezinye izilonda ezifana neepomule, amaqhuqhuva, ii-cysts, amanxeba. Ihlala ichaphazela ubuso, kodwa inokwenzeka nasemva, esifubeni, emagxeni nasentanyeni. Nangona ingesiso isifo esibi, isenokungathandeki kwaye ikhubekise. Xa induna iqatha inokushiya amanxeba ngokusisigxina. Nokuba amatyala amabi kakhulu anokulandelwa ngamanxeba.
Uphando ngamabala lunxulumana notshintsho olwenzeka ngexesha lokukhula, xa abantu besuka ebuntwaneni ukuya ebusheni. Ukonyusa ukugxila kwehomoni ngexesha lokufikisa kubangela ukuba amadlala asebusweni, abonwe kwiindawo apho i-acne ixhaphake khona (ubuso, umva, intamo, nesifuba). Imeko yenziwe yasebenza ngamahomoni ohlobo lwamadoda, akhoyo kokubini amadoda nabasetyhini.
Amadlala aqaqambileyo avelisa into enamafutha, ebizwa ngokuba yi-sebum, ekhupha ngokuvuleka kweefollic kwaye ibekwe kumphezulu wolusu. Amadlala adityaniswe kumsele oqukethe iinwele (i-follicle). Izinto ezinamafutha zibonakala ngathi zivuselela ulusu lwangaphakathi lwefollicle, lubangela ukuba iiseli zikhawuleze ngokukhawuleza kwaye zinamathele kwenye, zithintele ukuvulwa kolusu. Ukongeza, umxube wezinto ezinamafutha kunye neeseli zikhuthaza ukwanda kweebhaktiriya ezikhoyo kwiifollic, ezivelisa iikhompawundi zemichiza ezinokonakalisa udonga lwayo. Xa olu donga lwaphukile, i-sebum, ibacteria kunye neeseli zolusu ezingafunekiyo ziyabaleka. Le yinkqubo ekhokelela ekwenziweni kwamaqhakuva amakhulu kunye namaqhuqhuva.
Iintsomi malunga namabala
Yinyani kwaphela into yokuba amabala ayanyangeka ngokuchaphazeleka lilanga. Oku kunokuphucula kancinci emva kokuba selangeni, kodwa ukukhanya kwelanga kunceda kuphela okwexeshana kwaye, ekuhambeni kwexesha, kuyenza mandundu imeko ngokwenza amabala abonakale ngakumbi. Ukongeza, ilanga eligqithisileyo kangangeminyaka emininzi linokubangela ukuguga ngaphambi kwexesha kolusu kunye nomhlaza wolusu okubi kakhulu.
Amabala akaphumi ngokungawuhlambi ubuso bakho okanye ukungcola okuqokelelweyo. Iiblackheads zilahliwe iiseli zolusu olufileyo kunye neoyile yolusu eyomileyo, ekhoyo ekuvulekeni kweefollic zeenwele. Kukhathalelo oluqhelekileyo lolusu, kufuneka uhlambe ubuso bakho ngesepha ethambileyo kunye namanzi ashushu kabini ngemini okanye usebenzise iimveliso ezifanelekileyo koku.
Akuyonyani ukuba xa uphinda uhlamba ubuso bakho, kuya kubakho amabala amancinci okanye iintloko ezimnyama, oku kunokwenza ukuba amabala abe mandundu. Kukwacetyiswa ukuba uhlambe rhoqo iinwele zakho ngeshampu. Ukuba iinwele zinamafutha, kusenokufuneka ukuba uzihlambe rhoqo
Amadoda ane-acne ukuba angacheba, kufuneka alumke xa esenza njalo, ukuba usebenzisa iincakuba ezilahlwayo, i-blade kufuneka ihlale ibukhali, okokuqala ndincoma ukuba uthambise iindevu ngesepha okanye uchebe amagwebu kwaye usebenzise amanzi ashushu, Oku indlela onokuthi uyiphephe ukukrwempa amaqhakuva, kwaye uhlala uyenza ngononophelo kwaye ngaphandle kokucinezela, ukuba unokuthintela ukucheba ezimbalwa evekini kungangcono kancinci ukuze ungacaphukisi unyawo kakhulu
Amabala awabangelwa kukutya ukutya okuthile. Oogqirha besikhumba banezimvo ezahlukileyo ngokubaluleka kokutya kunyango kodwa bayavumelana ngento enye: ukutya okungqongqo akwanelanga ukunyanga amabala. Kwelinye icala, abanye abantu bafumanisa ukuba amabala abo aba mandundu xa besitya ukutya okuthile. Ukuba kunjalo, kuya kufuneka uphephe ukutya okucacisa gwenxa i-acne yakho. Kuyaziwa ukuba isonka, irayisi, iitapile, ipasta kunye neelekese zinokunyusa iimfuno ze-insulin kwaye oku kuyenza ibe mandundu indalo ngoko ke akukhuthazwa ukuba uyixhaphaze.
Lwenziwa njani unyango lwamabala?
Unyango lwamabala amabala yinkqubo ehlala ihleli ukuba ufuna ukuyilawula. Unyango olwenziwe ngugqirha wesikhumba luya kwahluka ngohlobo lwakho lwamabala. Kuyanceda ukwazi imibuzo embalwa malunga nonyango:
Amayeza okubangela amabala okanye amayeza: Okokuqala, ugqirha wesikhumba kufuneka agqibe ukuba imeko yesikhumba sakho sisifo esiqhelekileyo, kuba kukho amaxesha apho irhashalala efana nesikhumba inokuba nezinye izizathu, umzekelo, zizithambiso ozisebenzisileyo okanye amayeza owasebenzisayo ngomlomo. Ugqirha wesikhumba sakho uyakufuna uncedo lwakho ukugcwalisa uluhlu lwento oyisebenzisayo kulusu lwakho kunye nento oyithathayo.
Ukunyanga kwamayeza e-acne: Uninzi lwamaqhakuva kunye neekhrim, ezikhoyo ngaphandle kwemizila, zinokuba luncedo kwiimeko ezinobuzaza, kodwa uninzi lwazo luya koma isikhumba sakho ukuba uzisebenzisa rhoqo. Ukuba usebenzisa iimveliso ezinjalo, landela ngononophelo imiyalelo yomenzi.
Unyango olumiselwe ngugqirha wesikhumba kwi-acne: I-dermatologist yakho inokumisela amalungiselelo eengqungquthela (i-creams okanye i-lotions) ukunceda ukungabikho kwe-pores nokunciphisa inani leebhaktheriya. Ezi arhente zinokuma kwaye zixobule ulusu. I-dermatologist yakho iya kukufundisa indlela yokuyisebenzisa ngokuchanekileyo kwaye iya kukunika imiyalelo xa kunokwenzeka iziphumo ebezingalindelekanga.
Amaxesha amaninzi amiselweyo intsholongwaneZithathwa ngomlomo kumatyala amodareyithayo okanye aqatha, ngakumbi xa kukho izilonda ezininzi ngasemva okanye esifubeni, ukwenzela ukunciphisa ibhaktiriya ekhoyo kwiifollic. Kukwakho namalungiselelo okubulala iintsholongwane anokusetyenziswa eluswini, asetyenziswa kwimeko ezibi kakhulu zamabala.
Kwimeko yamabala amabi kakhulu, Amanye amayeza omlomo anokusetyenziswa, anokubandakanya iihomoni zabasetyhini kunye nezinye iziyobisi ezithoba iihomoni zesilisa. Elinye iyeza lomlomo, isotretinoin, ngamanye amaxesha lisetyenziselwa ukunyanga amabala abukhali angaphendulanga kwezinye iindlela. Izigulana ezisebenzisa i-isotretinoin kufuneka ziziqonde kakuhle iziphumo ebezingalindelekanga zearhente, kananjalo nokwazi ukuba ukutyelela rhoqo kulusu lwedermatologist kuya kufuneka ukubabeka esweni.
Abanye Iziphumo zevithamini A Imixholo, efana ne-retinoic acid okanye i-adapalene yanamhlanje, ibonakalisiwe ukuba iyasebenza ekulawuleni nasekukhuseleni ukubonakala kwezilonda zamabala amatsha ngokunyamezelana okugqwesileyo.
Akukho lunyango lwamsinya okanye olusisigxina lwe-acne, kodwa inokulawulwa, kwaye unyango olululo lunokuthintela ukonakala okusisigxina. Nokuba loluphi unyango olukhethekileyo olusebenzisayo ugqirha wakho, khumbula ukuqhubeka nokukhathalela ulusu lwakho kude kube ngathi ukunyamalala kwamabala kuye kwanyamalala.
Icebiso: Sukucofa, ukukrwela, pop, okanye ucofe amaqhakuva. Xa amaqhakuva ecinyiwe, ububomvu, ukudumba, ukudumba kunye nokwanda kuyanda, kukhokelela kwizilonda ezintsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Amabala, ungawathintela njani?
URichard nicolas britos caceres sitsho
Molo, ndihlukile kwaye ndinamaqhakuva ukusukela oko ndandineminyaka eyi-13, andazi ukuba kutheni izakuba njalo, ngokuqinisekileyo ngenxa yokufikisa kwam kodwa bendifuna nje ukuthi ayonwabisi ukuba nala mabala abomvu maxa wambi abuhlungu!
Phendula u robert nicolas britos caceres
Ndidinga uncedo ndinamaqhakuva amaninzi esifubeni sam kwaye inyani inentloni andinakwenza nto okanye ndiye elwandle ndikhulule ihempe yam! iyadinisa kwaye ibuhlungu!
Nceda, ndingavuya ukuba unganceda!
Kufuneka ugcine ubuso bakho bungabinayo ioyile kwaye kungekho pores zingavalwanga. Ngenxa yoko kukho Vichy Normaderm elungileyo kunye neemveliso zeNeutrogena eziqukethe i-salicylic kunye / okanye i-glycolic acid. Ukucoca + ukucoca iipoyinti ekuseni kunye nokungavali pores ebusuku. Khumbula ukuthambisa ebusuku kwaye utshintshe iphedi rhoqo njengoko iqokelela amanqatha.
Ndineempumlo ezininzi ezibuhlungu nasebusweni, emqolo nasesifubeni, zibuhlungu kwaye zineentloni kakhulu
kodwa kule minyaka yam yobudala ndiyi-15
ukufikisa apho umntu anokufumana uxinzelelo oluninzi
uxinzelelo ngakumbi, kokubi
Ndizamile yonke into ukufumana amaqhakuva ebusweni bam kancinci
Ndiyavuma ukuba ekuphela kwento endiyisebenzisayo kwaye ukuza kuthi ga ngoku iyandisebenzela yi-aloe vera 😀
Ndihlamba ubuso bam yonke imihla ... ebusuku ndaphinda ndavasa ubuso bam ndabeka i aloevera ndaza ndalala naloyo ngengomso ndihlamba ubuso njalo njalo
Kunzima kakhulu ukungafuni ukugqabhuka amaqhakuva xa kufuneka uphume ngakumbi kunye nentombazana kuba imbi kwaye ebusheni uluvo lomnye kuwe lubaluleke ngakumbi kwelinye: /
Nangona kunjalo, ndiyathemba ukuba ngokuhamba kwexesha amaqhakuva am aya kuncipha
UMBUZO OHLAWULA UKUHLALA NDIWUQHUBA… ..
Ngexesha lokufikisa amadoda rhoqo ukuya kuma-80% ngaphezulu okanye ngaphantsi
Bachaphazeleka ngamaqhakuva kunye namaqhakuva
ngokuhamba kwexesha kubantu abadala ... amaqhakuva ayanyamalala ngokwendalo okanye sele simakelwe ubomi?
Mholweni !! Umbuzo wokutsalwa kwibhedi yokusuka ngombala omnyama kunesikhumba sam. Ngaba inganceda ukuguqula amabala?
Molo, igama lam ndinguLuis, ukuba ndihlamba yonke imihla ngesepha namanzi, amaqhakuva aya kuphuma, nceda undixelele, enkosi
Isandwich yaseNeapolitan emnandi